Global Voices teny Malagasy » Ny filoha Bingu ve no “Mosesy”-n’i Malawi? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Mey 2019 4:20 GMT 1	 · Mpanoratra Victor Kaonga Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Malawi, Fahasalamàna, Fanabeazana, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Mamaky ny fotoana ny mpanakanto sasany ary mametraka paikady mifanaraka amin'izany. Mahatonga ireo Malaoita marobe hihira ilay hira malazan'i Joseph Nkasa mitondra ny lohateny hoe Mose wa Lero, na dia tsy te-hihira izany aza izy ireo, noho ny fomba nampifandraisan'ilay mpanakanto an'i Mosesy anaty baiboky ny filohan'i Malawi, Bingu wa Mutharika. Ao amin'ilay hira izay hita ao amin'ny bilaogin'i Mutharika , milaza ilay mpanakanto Nkasa fa nitarika ny Malaoita hiala an'i Ejypta i Mutharika, satria noana sy nanana olana samihafa tao izy ireo. Nampian'ilay mpanakanto koa fa tsy te hiverina any Ejypta ireo Malaoita, tahaka ny nataon'ny Israeliana ihany, izay milaza am-piesoesoana ny filoha teo aloha Bakili Muluzi , izay nanambara ny fikasany hirotsaka hofidiana filoham-pirenena amin'ny taona 2009 ao Malawi. Mitondra ny anarana Mose wa Lero (Moïse maoderina) ankehitriny ny filoha amin'ny hetsika fanentanana rehetra.
Raha teo amin'ny politika, vao haingana ny filohan'i Malawi no nanao fanavaozana ny kabinetra izay nahitana ny fialan'ny minisitry ny fahasalamana, Marjorie Ngaunje namela ny lalana ho an'i Khumbo Kachale. Araka ny mety ho hitanao, noho ny fitovian'ny anarana, dia mora ho an'ilay mpitsabo tokana momba ny maso Dr Khumbo Kalua  no ho voafitaka fa izy no nahazo ny asa ambony indrindra tao amin'ny minisiteran'ny fahasalamana indrindra fa nahazo hafatra sms momba ny fanendrena izy. Nobilaogiany ny tsy nahazoany ny fidanadanana ho lasa minisitry ny kabinetra manan-kaja :
Malaoita mianatra any Bostwana, Benett Kankuzi  mitaraina momba ireo olana atrehan'ny mpikaroka any Afrika. Tamin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe Ny fanamby amin'ny fanaovana fikarohana akademika any Afrika , itarainany ny tsy fahampian'ny fanohanana avy amin'ny governemanta izay manome fanampiana ara-bola tsy araka ny tokony ho izy. Nilaza izy fa amin'ny maha mpikaroka mitsidika firenen-kafa, dia tsy afaka miantehitra amin'ny tompon-trano mba hikarakara azy izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/14/138667/
 bilaogin'i Mutharika: http://bingu-mutharika-nts.blogspot.com/2008/02/mose-wa-lero-slideshow-joseph-nkasa_23.html
 Bakili Muluzi: http://wapedia.mobi/en/Bakili_Muluzi
 Marjorie Ngaunje : http://www.nyasatimes.com/index.php?news=2061
 Dr Khumbo Kalua: http://khumbokalua.blogspot.com/
 tsy nahazoany ny fidanadanana ho lasa minisitry ny kabinetra manan-kaja: http://khumbokalua.blogspot.com/2008/02/i-am-now-honorable-dr-kk-minister-guess.html
 Ny fanamby amin'ny fanaovana fikarohana akademika any Afrika: http://bkankuzi.blogspot.com/2008/02/challenges-of-doing-academic-research.html